Yakagadzirira, Moto, Chinangwa | Martech Zone
Yakagadzirira, Moto, Chinangwa
Muvhuro, October 25, 2010 Chitatu, October 29, 2014 Douglas Karr
Manheru ano hwaive husiku hukuru hunoshandiswa nevamwe vanozivikanwa kwazvo mukutengesa, kushambadza uye nyanzvi dzekumaka. Takakokwa kuresitorendi yakanaka kwazvo mukamuri yega. Chinangwa chemusangano uyu chaive chekubatsira waaishanda naye uyo aida kutora bhizinesi rake kuenda padanho rinotevera… kana mashoma mashoma kupfuura pari zvino.
Mumba maive netani yechibvumirano… funga kuti chii chaunoita muchirevo chimwe chete, doma hunhu hunosiyanisa iwe, gadzira nzira yekutengesa masevhisi ako zvichienderana nehunhu hwaunounza, batanidza netiweki yako kuti uone tarisiro yepamusoro yekushambadzira uye kukudziridza chiratidzo chinosanganisira izvo zvaunounza patafura.
Ini hazvina hazvo kubvumirana neizvi… asi ndiro rimwe basa rakanakisa, handizvo here? Unogona kushandira kwemakore pazvinhu izvi… wozopedzisira wadzokera kudhirowa bhodhi nekuti hauna kubudirira.
Neruremekedzo rwakafanira kune vandinoshanda navo, ndinogara ndichifunga kana nyanzvi dzichipa rudzi urwu rwekuronga zvine hungwaru nemazano. Ndanga ndichitendeka kushanda mukati nekutenderera madhipatimendi ekushambadzira kweanopfuura makumi maviri emakore izvozvi uye handikwanise kufunga nezvechimwe chirongwa chekushambadza chakashanda sezvakarongwa.
Mukuvimbika kwese, ndinofunga yakawanda yeiyi hurukuro ingori poppycock.
Haisi bhandi rakazara… ndinotenda kufunga zvine hungwaru kwakakosha. Mushure mezvose, iwe unofanirwa kuziva kuti iko kwese kunongedzera kwechinangwa chiri usati wavhomora chikungiso. Nekudaro, ini ndoda kuti mumwe munhu atange kupisa moto ndozonanga pane kushanda kwemwedzi kumisikidza pfuti inogona kana kusarova iyo bhuru.
Ini ndinowanzoona mabhizinesi achikundikana vasati vambodhonza chaiko. Ivo vanotya zvakanyanya kukundikana zvekuti vakaremara mitezo uye havatombo nyatso kutora njodzi dzinodiwa kuti vafambe kuenda kumberi. Tarisa kutenderedza iwe kumabhizinesi ari kubudirira. Vari kubudirira here nekuti vakaronga zvisina chavanopomerwa? Kana ivo vanobudirira nekuti vaive vakasimba uye vachikwanisa kugadzirisa zano ravo sekudiwa kwezvavaitarisira, vatengi vavo neindasitiri yavo zvaidikanwa?
Ndeapi maonero ako? Chiitiko?
Tags: chinangwaongororomotoMarketing nzirawakagadzirira
Iko Kukosha kweZviitiko zveVashanyi
Mafomu Ekubatana, Bots, uye Shameless Spam
Gumiguru 25, 2010 na11: 03 PM
Ini ndinofunga wakakodzera pachikamu chikuru. Zvinotaridza kwandiri kuti zvinoenderana nezvauri kuita uye kuvimba kwako sei kuti chimwe chinhu chakakodzera kusimudzira. Zvandiri kureva ndezvekuti dzimwe nguva zvinonyanya kukosha kuti uwane chirongwa chepamutemo munzvimbo chine gwara uye chinangwa. Izvo zvinobatsira vanhu vari kuita chirongwa kunyatso kugara munzira. Nekudaro, mukati meiri zano panofanirwa kuve nekuitwa kwakawanda kupfuura kuronga. Pakutanga nzira dzinogona kupidiguka pasi mumazuva mashoma. Izvo zvinoda shanduko dzinokurumidza.
Kuti utore fananidzo yako zvakadzama, fungidzira kana iwe usina kutarisisa zvachose usati wadzinga. Unogona kurova chakanangwa, asi ungangodaro ucharasikirwa zvachose, kana kurova shamwari, kana iwe pachako. Ndosaka ndiri kufunga kuti izvi zvinoenderana nekuti unovimba zvakadii nezano kana bhizinesi (rakakura sei tarisiro).
Saka kuti tiunze zvese pamwe - munzvimbo ino yemakwikwi isu tese tiri, tinofanirwa kunongedza nekukasira AT chinangwa uye moto, tobva tarisa zvakare moto zvakare, wobva wanyatso tarisa uye moto zvakare. Kana ... ingounza pfuti.
Gumiguru 25, 2010 na11: 04 PM
Ndinewe pane ino. Sezvo ndabva kusangano rakakura-diki uko kumhanyisa kwakayerwa mumwedzi nehafu makore uye "zano + kuiwana" chaiko vaive makore gumi neshanu masangano ini ndakaona kukosha kwekungomira patakatanga kushandisa nzira nyowani mukushanda kwebhizinesi redu. . Ikozvino kumhanya kushambadzira kwekutanga kwaive, pandakatanga, kudiki pane timu yekutengesa yakandishandira yako poindi yakatonyanya kukosha. Zviitiko pamwe chete zvevakuru vechikwata zvinofanirwa kunge zvakakwanira kukunongedza munzira kwayo. Kuva akagwinya uye kuva nani nguva dzose kuri pamusoro pehunhu hwekushanda… hwakakosha zvakanyanya uye hunowanzo kufuratirwa hunyanzvi hwakagadzirirwa zvikwata zvinokura.
Gumiguru 25, 2010 na11: 10 PM
Zvizere unobvumirana, Brian! Zvinosemesa ndezvekuti ini ndinoshandisa yakawanda yenguva yangu yemahara kuverenga nekudzidza mhedzisiro yevamwe kuitira kuti ndizive kuti ndeipi nzira iyo chinangwa 'chinofanira kunge chiri'. Ini ndinongonetseka kuti makambani mazhinji haatombotora danho rekutanga. Ivo havakundike nekukasira nekuda kwekukanganisa nzira ... asi ivo pakupedzisira vanokundikana sezvo vamwe vanovapfuura.
Gumiguru 25, 2010 na11: 24 PM
Hongu ndinobvuma. Ini handina kuona zvakaipa kushambadzira kwekutanga asi ini ndinoramba ndichinzwa nyaya dzemakambani ekare achinetseka chaizvo nekutanga kushambadzira kwekuedza Ivo havangoiwana saka zvese kuronga pasi hazvivabatsire kudzidza izvo chaizvo zvidzidzo zvavanoda kuitira kudzokororazve uye kupfura zvakare uye havadzokerezve nekukasira zvakakwana kugadzirisa dambudziko.
Nenzira, icho chienzanidzo chikuru. Inoshanda chaizvo mune ino kesi. Wataura chokwadi nezve kungoziva kuti tarisiro iripi uye ndine chokwadi kuti une pfungwa yakanyanya yeizvozvo. Vamwe vanhu havadaro. Ndiani anoziva kana kuronga kunobatsira, asi murume pane vamwe vanhu vanozvingozvipfura netsoka nekushambadzira kwavo. (Ini ndaifanira kuzvitaura, zvakaringana chete)
Gumiguru 26, 2010 pa 12:30 AM
Doug Ini handina kukwanisa kubvumirana newe zvakanyanya. Pakadzika pekuti ini ndiri ani: ENTREPRENEUR. Uye kusvika kune vezvemabhizimusi vanoenda ini ndese nezve kuona ramangwana uye kutora chero matanho anodiwa kuti usvike ipapo. Ini ndinotenda mumazano. Ndinotenda mukuronga. Zvisinei, ndinofanira kureurura handina kumbobvira ndagadzira yechinyakare "bhizinesi chirongwa."
Gore rakapfuura ndakaita hurukuro nemurume munyoro. Handina kana kurangarira zita rake. Takasangana kekutanga pamusangano wekuseni watakapinda tese munzvimbo yeCastleton, Indiana. Yaive imwe yeaya "kumira-kunze-mu-kupaka-mota-kwe-pamusoro-kwe-awa-mushure-iwe-kungo-kusangana-kukurukurirana" uye neimwe nzira takasvika pamusoro wenyaya wekugadzira chirongwa chebhizinesi. Ndakareurura kwaari kuti ndakanga ndisati ndagadzira yechinyakare bhizinesi chirongwa. Akandibvunza "Unoronga chero nguva munguva pfupi kuenda kunotora mari kubhangi kune rako bhizinesi diki?" Ndakapindura, "Aiwa." Ipapo usazvidya moyo nezvehurongwa hwebhizinesi, akadaro. Mukutaura, akandiudza "Moto uye Chinangwa." Akandikurudzira kuti nditevere mweya wangu webhizimusi uye ndibude ndibudirire.
Uye saka Doug ndizvo zvandave ndichiita kwemakore matatu apfuura kubvira pandakatanga Muchinjikwa munaGumiguru wa3. Saka Rakafara Zuva Rokuberekwa kukambani yangu uye mamwe makore mazhinji ebudiriro kwatiri apo isu patinoyedza kushandira nezvido zvinomutsa. isu kumusoro zuva rega rega nyowani! Izuva rakanaka rekuve muzvinabhizimusi.
Gumiguru 26, 2010 pa 6:55 AM
Zvinobvumirana zvachose, Doug. Kuongorora kupora mitezo haisi chiratidzo chemakambani makuru. Vazhinji varidzi vemabhizinesi madiki vanotya kufamba zvisiri izvo zvakare. Chiito, chine metric yekuyera kubudirira, izano rakanaka. Fortune anofarira akashinga.
Gumiguru 26, 2010 na1: 07 PM
Iniwo ndinobvumirana Doug, Kugadzikana izita remutambo nhasi. Strategic kufunga nhasi inofanira kusanganisira kugona kukurumidza kuchinjika kune inogara ichichinja musika.
Gumiguru 26, 2010 na3: 19 PM
Ichi ndicho chikonzero ivo vanobudirira chaizvo vanamuzvinabhizimisi vanotanga mabhizimusi… wozovatengesa kune vezvematongerwo enyika vanotaura zvakanyanya "poppycock" kuti vatombotanga imwe voga.